Odayaal dhaqameed, aqoonyahano iyo Siyaasiyiin ka soo jeeda Gobolka Bay iyo Bakool ayaa ku tilmaamay hab cadaalo darro ah nidaamka uu Col. Cabdullahi Yusuf ku doonayo inuu dib u habeyn ugu sameeyo gobollada dalka Soomaaliya
Buluugleey December 17, 2005
Odayaasha dhaqanka iyo aqoonyahano iyo weliba siyaasiyiin ka jeeda gobolka Bay iyo Bakool ayaa ka soo horjeestey siyaasada qaldan ee uu Col. Cabdullaahi Yusuf ku doonayo nidaamka cadaalad ku dhisnaa maamulka gobolada. Siyaasadaan cusub oo uu Col. Cabdullahi Yusuf ku doonayo inuu ka hirgeliyo goballada dalka ayaa ah mid lagu damacsan yahay in la isku raaciyo gobollo aan horey degaan wadaag u ahayn. Nidaamkaan oo loogu yeero (Joint Network Assessment) oo ujeedada ka danbeyso ay tahay in awooda gacanta loo geliyo dad ka amarqaato siyaasiyiinta ka soo jeeda Bari ee Col. Cabdullaahi la heyb wadaaga iyo inuu gobolada koofureed marka laga reebo Bari uu u googooyo degaano qabiil oo horumarintooda iyo maamul u sameyntooda uu ku xiro dhuuni uu soo laalaadiyo.
Nidaamkaan gobollda dalka dib loogu habeynayo ayaan ahayn mid sal quman ku taagan, kana fog dib-u-dhisida gobollada dalka laga wada simayo. Xeeladan ayaa ah mid ujeedada ka danbeeysa ay tahay in laga wareejiyo dadka u taliya degaanka ee aan raacsaneyn siyaasada Col. C/llahi Yusuf.
Maamulada laga damacsan yahay in laga hirgeliyo gobolada dalka ayaa u muuqda inqilaab lagu doonayo in lagu abuuro maamulo maqaar-saar ah oo ku shaqeeya dhaqaalaha gaarka ee gacanta ugu jira Col. C/llahi Yusuf. Haddii ay hirgasho ujeedadaas waxaa muuqata in gobolo badan ay milkiyad wareegayaan sida gobolada Bay iyo Bakool.
Waxaa kaloo jirta in gobollada ay ka midka yihiin Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe oo ah tan ugu muhiimsan siyaasada Col. Cabdullahi Yusuf uu ku doonaya inuu hogganka gobolladaas gacanta ku dhigo ayna milkiyoodu ku wareegto beesha guud oo ay bahwadaagta yihiin. Waxaa sidoo kale aan meesha ka marneyn gobolka dhexe oo aan laga daneyneyn maamulka iyo siyaasada Col. Cabdullahi Yusuf , inuu ku doonayo sidii uu hogaano cusub ugu abuuri lahaa.
Dabinka maldahan ee uu Col. Cabdullahi ku doonayo in uu ku hantiyo maaliyada loogu tala galay dhismaha gobolada dalka ayaa ah mid u daneynaya jeebka ganacsatada reer Bari ee isga u sarifta lacagaha deeqda ah.
Siyaasada qaldan ee uu Col. C/llahi ku doonayo in gobolada dalka uu dib maamul ugu magacaabo ayaa ah mid ka hor imaaneysa nidaamka u degsan dastuurka dalka oo aheed inuu ku shaqeeyo ogolaanshaha goloha baarlamaanka. Weliba taa waxaa la xiriirta in uusan jirin wax aqoonsi ah ee ah ansaxida aqlabiyada dadweynuhu oo ay ku taageerayaan fikradaas ku aadan maamul u sameynta gobolada.
Waxaa sii xoogeysanaya mucaaradka xoogan Dowalada ee Col. Cabdullahi Yusuf ka heysta magaalada Muqdisho. Arrimahan dhoorka ah ee soo foodsaartay siyaasada Col. Cabdullahi ayaa ugu wacan in xilligaan uu u keeno fikrada ah waxa uu ugu yeeray dib u habeynta gobolada dalka iyo dhibudhiska gobolada.
Siyaasiyiinta qaarkood ayaa u arka in arrintani qeyb ahaan uu korneylku ku doonayo inuu kaga hortago maamul u sameynta looga dhawaaqay gobolka Banaadir iyo mucaaradka dowlada Cabdullahi Yusuf ka soo horjeeda oo ku sii xoogeysanaya dhamaan gobolada dalka.
Garabka Jowhar is muujinta ay u sameynayaan beesha caalamka waa midan waxba ka soconeyn, waayo dowlad aan lahayn maamul dhexe iney ku hamiso maamul u sameynta gobolada dalka waa howl gacmo daalis ah, ujeedadeeduna tahay in xisaab celin beena lagu sameeyo lacagaha gargaarka ah ee umada Soomaaliyeed loogu deeqay.